शीर्षक परिचयचारआँखे अर्थात् दुई आँखामाथि दुई पहेँला थोप्लाहरू भएको भोटेकुकुर (मंगोलियन डबल आइड) नै महाभारतमा वर्णित युधिष्ठिरको साथी हुनुपर्छ भन्ने निर्क्योल थियो पंक्तिकारको । जुन लेख असहमति–२ मा मुद्रित छ । तर, देवनागरीमा टाइप गर्न नआउने र पुस्तक छापिने क्रम पनि ढिलो हुन जाँदा उक्त सामग्रीलाई युनिभर्सिटी अफ टेक्सस, अस्टिन अमेरिकाको एक वैज्ञानिक शोधले लगभग एक वर्षले उछिनिसकेको रहेछ । तैपनि उसको निर्क्योल पनि उही टुंगोमा पुगेको देखिन आयो— कुकुरको घरेलुकरण नेपाल–मंगोलिया सिमानामा सुरु भएको हो र त्यो घटना १५ हजार वर्षअघिको हो ।
समुद्र किनारमा एक कुटी
शीर्षक परिचयथेग्नै गाह्रो हुनेगरी सामान लादिएका अजंगका मालवाहक पानीजहाजहरू बगालै यात्रा गरिरहेको देखिने, तर चौडाभन्दा चौडा बगरको वारि नै ताड र नरिवलका रूखहरू तल ठिंग उभिएको कुटीलाई ‘नेपाल’ भनेर बुझियो भने यो लेख निष्चय नै स्पष्ट हुनेछ ।
जागिरेहरूएकनेपालमा संविधानको एउटा मस्यौदा निस्क्यो । मैले दिल्लीमा प्राप्त गरें । यो ठीक–बेठीक के छ बाबाजी (चन्द्रशेखर, इन्डियाका पूर्वप्रधानमन्त्री) कहाँ पनि पुर्‍याइदिनुपर्‍यो भनेर भोलिपल्ट डा.गोविन्द रेग्मी, डा. रामपदारथ बिछा र मैले त्यो मस्यौदा दियौं । चन्द्रशेखरलाई सम्झँदा– प्रदीप खतिवडा, कान्तिपुर, २०६४ असार २५ । पछि यी बंगलादेशका निम्ति राजदूत भए ।
सेमियोटिक्सको अर्थनयाँ उब्जेका प्रतीकहरूलाई शास्त्रीय रूप दिने, त्यसको मूल्यलाई स्थापित एवं व्याख्या गर्ने कार्य हो सेमियोटिक्स साह्रै सरल भाषामा भन्नुपर्दा । मोटो अर्थमा प्रतिमा लक्षणशास्त्र (आइकनोग्राफी) र सेमियोटिक्समा भिन्नता छ जस्तो लाग्दैन पनि । तर, यसको चलन नै नेपालमा नभएको हुँदा सेमियोटिक्सलाई एउटै शब्दमा परिभाषित यतिबेला गर्न सकिन्न । त्यो हास्यास्पद हुन पुग्छ, कृत्रिम लाग्छ ।
धारणाहरू गोंग याने कुखुराको भाले भन्छन् छानाका चार कुनामा रहेका उड्न लागेका जस्ता चरालाई ठिमी, भक्तपुर, बुङ्मती, कीर्तिपुर आदि निवासीहरूले । गोंगपा याने भाले इँट भन्छन् खोकनाकाहरूले ।
फुर्का पौभाको : हिमालयबाट पेरिससम्म
सोझै प्रारम्भडोटीको फलेडीबाट नेपाली कागज बनाउन थालिएको हो (११ असोज २०३२ को गोरखापत्रमा सूर्यप्रसाद जोशी) ।
नेपाल नाम कसरी रह्यो ? भन्ने प्रश्नका अघिल्ला उत्तरहरू सूचीबद्ध गर्ने हो भने यस अखबारका दुई पानाले पनि पुग्दैन । अनगिन्तीले अनगिन्ती तर्क विगतमा प्रस्तुत गरिसके । सबैभन्दा पछिल्लो उल्लेखनीय तर्क ‘नेपाल निरुक्त’ हो, ज्ञानमणि नेपालको ।